Kutanga Center, Astro 3D uye mimwe mitambo uye maapps ari kutengeswa kwenguva shoma | IPhone nhau
Isu tiri pakati chaipo pebasa rebasa kune vazhinji venyu. Chitatu umo kunhuwirira kwevhiki kuri kutotanga kunzwisiswa, kuzorora, kubviswa, uye mabiko uye kusazvibata kwevamwe. Kunge svondo rega rega pazuva iri, ini ndoda kuita nzira yako kuenda kupera kwevhiki chimwe chinhu chinotakurika ne kusarudzwa kwemitambo uye maapplication ane zvakakosha kuderedzwa, ye iPhone, iPad uye iPod Kubata.
Rangarira kuti zvese zvinotevera zvinopihwa uye kukwidziridzwa zvichave zvinoshanda kwenguva shoma. Kubva IPhone nhauTinogona chete kuvimbisa kuti iwe unogona kunakirwa neiyi zvipo panguva yatinoburitsa ino posvo, zvisinei, isu hatizive kuti vachashanda kwenguva yakareba sei Naizvozvo, kana paine chero chavanofarira iwe, usamire kuti ufunge zvakanyanya uye uwane. Usakanganwa kuti kana zvisiri izvo zvawaitarisira, uye kana iwe wakabhadhara chimwe chinhu kumutambo iwoyo kana iyo app, unogona kugara uchidzosera uye kudzosera mari yako. Ngatione izvo zvinopihwa zvatinazvo nhasi muApp Store yeIOS.
1 Kutanga Center Pro
3 Deus Ex Endai
Isu tinotanga neimwe yeamashandisirwo aunoona iwo ekushandisa zvakanyanya uye ekushandisa kugona kuwana, zvese kubva kune yako iPhone uye kubva kune iyo iPad.
Kutanga Center Pro kunokutendera kuti uchengetedze yakawanda nguva uye uve unobudirira sezvo nazvo uchigona gadzira mapfupi emabasa aunoita kazhinji pane yako iOS chishandiso, kubva kutumira meseji kune chaicho chinongedzo, kutumira tweet kana kuita kutsvaga kweGoogle, kutumira email, kuongorora barcode uye kuitsvaga kuAmazon, uye zvimwe zvakawanda. Mikana yacho inenge isingagumi nekuti Kutanga Center Pro ikozvino inoshanda neanopfuura zana maapuro!
Kutanga Center Pro Iine mutengo wenguva dzose we 2,99 euros, zvisinei ikozvino unogona kuwana iyi purogiramu ne66% dhisikaundi ye0,99 euros chete, zvese mushanduro yayo ye iPhone uye neshanduro yayo yeIpad.
Astro 3D kumwe kushandiswa kusinganzwisisike kwechikamu chedzidzo chaunogona nacho ongorora zvakasikwa nenzira yausina kumbofungidzira.
Astro 3D inotakurika nyeredzi nyeredzi maatlasi evadzidzi venyeredzi, kune vese vanotanga uye vane ruzivo. Shandisa Astro 3D kuti uwane mapuraneti, nyeredzi, mapoka enyeredzi, masumbu enyeredzi, magaraxies uye nebulae ayo anoonekwa kwauri zvichienderana nenzvimbo yako nenguva. Astro 3D inotoshandisa kambasi kugadzirisa mapu!
Astro 3D Iine mutengo wenguva dzose we1,99 euros, zvisinei ikozvino unogona kuiwana pahafu yemutengo wemamiriyoni e0,99 chete
Deus Ex Endai
Kubva kune vakafanana vadziki vemitambo inozivikanwa "Hitman" uye "Lara Croft Go", inouya Deus Ex Endai, "a Turn-based puzzle chinyararire mutambo wakagadzwa mune yakanaka dystopi ramangwana. Tora chinzvimbo cheMumiriri Adam Jensen kugadzirisa mapuzzle mubhodhi, kupinda mukati mekuhwanda kwevavengi uye kuburitsa chakavanzika chinovhiringidza. Dzivisa muvengi nekurwa, kunyepera kana kubiridzira, uye nekuvandudza hunhu hwaAdamu nekuwedzera mune ramangwana. "
Deus Ex Endai Iyo ine mutengo wenguva dzose we1,99 euros uye ikozvino unogona kuiwana kwehafu yemutengo, chete 0,99 euros.
Uye isu tinopedzisa iyi pfupi sarudzo yemitambo uye kunyorera pane yepakati-vhiki kutengeswa ne SKRWT, iko kunyorera kubva muchikamu chekutora kune vanoda kukwana.
Taura zvakanaka kumitsara inoshanduka - SKRWT ndiyo lens-yezvinangwa zvese uye maonero ekururamisa app yevanoda kuenzana. Inogadzirisa mitsara yakatwasuka uye yakatwasuka pamwe nekukanganiswa kwema lens kubva kumifananidzo yakatorwa nemaadapter, DLSRs, ine GoPro kana drone kamera. Iine imwe-ye-ye-mhando auto-chirimwa mashandiro uye inonzwisisika, inozvitsanangudza mushandisi interface, SKRWT ndiyo yekushaikwa chinongedzo mune yepamusoro-kumagumo smartphone kutora mifananidzo. Kana mhando uye symmetry isiri yako yakasimba sutu, SKRWT ndeyako.
SKRWT ine mutengo wenguva dzose we1,99 euros uye ikozvino unogona kuiwana kwehafu yemutengo, chete 0,99 euros.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Kutanga Center, Astro 3D uye mimwe mitambo uye maapps ari kutengeswa kwenguva shoma
Apple Campus 2 ichavhura madhoo ayo muna Kubvumbi ane zita reApple Park